Danjirayaasha ku sugan Muqdisho oo bogaadiyey madaxweynaha cusub
Updated About:251 days ago 0
Safiirada dalalka caalamka u jooga Somalia oo xalay goob joog u ahaa doorashada madaxweynaha ayaa u hambalyeeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Danjiraha jabuuti u fadhiya Soomaaliya Dayib Dubad Roobleayaa ku sifeeyey doorashadi xalay dhacday mid waa cusub uu ugu baryey umada Soomaaliyeed.
“Run ahaantii jawi fiican bay ku dhacday waxaana rajeyneynaa in umada Soomaaliyeed u furmo waa cusub oo nabad ah, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele door weyn ayuu ku lahaa nabadaan,” ayuu yiri.
safiirka Itoobiya ee Soomaaliya C/casiis Aadan ayaa ku nuux nuuxsaday sida uu ula dhacsanyahay qaabka ay u dhacday doorashada madaxweynaha Soomaaliya, isaga oo intaasi raaciyey in umada Soomaaliyeed iyo baarlamaankooda ay isku fikir wada noqdeen.
“Doorashadaan waa mid cad oo dimoqraadi ah aad baan ugu farxay waxa ugu fiican ayaa ah in dadka Soomaaliyeed oo dhan isku fikir weyn ayey noqdeen, sidi aan ula shaqeyneynay dowladi hore ayaan tanna ula shaqeyneynaa aad ayaana ugu farxay,” ayuu yiri.
Ciidamada Itoobiya ee jooga Soomaaliya ayuu safiirku sheegay in xaalkoodu uu ku xirnaan doono hadba dalabka dowlada cusub, oo hadii ay bax dhaxdo ay la baxayaan hadii ay garab weydistaana ay sii joogi doonaan.
Ku xigeenka wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya Wufulu Wamanyiyi oo AU-da xalay uga wakiil ahaa goobjooganimada doorashada ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha cusub iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Doorashada waxay aheyd mid xaq ah oo cadaalad ah oo si nabad ah ku dhacday aad ayaana ugu faraxsanahay, qof walba maqsuud ayuu ka ahaa waxaana u hambalyenayaa shacabka Soomaaliyeed, hogaamiyaha cusub iyo xildhibaanada,” ayuu yiri.
Dajiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya Cemalettin Kani Torun ayaa ka rajeeyey madaxweynaha cusub inuu la shaqeyn doono beesha caalamka, isaga oo u hambalyeeyey.
Ugu danbeyntiina, Midowga Yurub, Mareykanka, IGAD iyo Dowlada Qatar ayaa si isku mid ah ugu hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Prof. Xasan Sheekh Maxamuud.